China Direct Steam Retort ifektri abakhiqizi | Dingtaisheng
Isidlo Esikulungele Ukudla, Iphalishi
I-Satam Retort egcwalisiwe iyindlela endala yokuvala inzalo esitsheni esetshenziswa ngabantu. Okokufaka inzalo yethini, luhlobo olulula noluthembekile lokuphindisela. Kungokwemvelo inqubo ukuthi wonke umoya ukhishwe endaweni yokubuyisa ngokugcwalisa umkhumbi ngomusi futhi uvumele umoya ukuba uphume ngamaphayiphu omoya.Akukho ukucindezela ngokweqile ngesikhathi sezigaba zokuvala inzalo yale nqubo, ngoba umoya awuvunyelwe ukungena umkhumbi nganoma yisiphi isikhathi nganoma yisiphi isinyathelo sokuvala inzalo. Kodwa-ke, kungahle kube khona ukucindezelwa komoya okusetshenziswayo phakathi kwezinyathelo zokupholisa ukuvimbela ukusonteka kwesiqukathi.
Imithethonqubo ye-FDA kanye ne-China yenze imithethonqubo enemininingwane ekwakhiweni nasekusebenzeni kwe-steam retort, ngakho-ke yize ingadluli ngokusetshenziswa kwamandla, isathandwa kakhulu ngamakhasimende amaningi ngenxa yokuthi isetshenziswa kabanzi ezindaweni eziningi ezindala zokudla. Ngesisekelo sokuqinisekisa ukuhambisana nezidingo ze-FDA ne-USDA, i-DTS yenze ukulungiselelwa okuningi maqondana nokuzisebenzisela nokonga amandla.
Ukusatshalaliswa kokushisa okungafaniyo:
Ngokususa umoya esitsheni se-retort, injongo yokugcwalisa umusi ogcwele. Ngakho-ke, ekugcineni kwesigaba se-vent-up, izinga lokushisa emkhunjini lifinyelela esimweni esifanayo kakhulu.
Thobela isitifiketi se-FDA / USDA:
I-DTS ibhekane nochwepheshe bokuqinisekisa ukushisa futhi iyilungu le-IFTPS e-United States. Isebenzisana ngokugcwele nama-ejensi wokuqinisekisa ukushisa okuvunyelwe yi-FDA. Okuhlangenwe nakho kwamakhasimende amaningi aseNyakatho Melika kwenze i-DTS ijwayele izidingo zokulawulwa kwe-FDA / USDA kanye nobuchwepheshe bokunqanda inzalo.
Ilula futhi inokwethenjelwa:
Uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo zokuvala inzalo, ayikho enye indlela yokufudumeza isigaba sokuza nokuvala inzalo, ngakho-ke kuphela umusi odinga ukulawulwa ukwenza iqoqo lemikhiqizo lingaguquguquki. I-FDA ichaze ukwakheka nokusebenza kwe-steam retort ngokuningiliziwe, futhi ama-canneries amadala abelokhu eyisebenzisa, ngakho-ke amakhasimende azi umgomo wokusebenza walolu hlobo lokubuyisa, okwenza lolu hlobo lokuphindisela lube lula kubasebenzisi bakudala ukuthi balwamukele.
Layisha ubhasikidi ogcwele ngokugcwele kuRetort, vala umnyango. Umnyango we-retort ukhiyiwe ngokungena kathathu kokuphepha ukuqinisekisa ukuphepha. Umnyango ukhiyiwe ngomshini kuyo yonke inqubo.
Inqubo yokuvala inzalo yenziwa ngokuzenzakalela ngokuya ngeresiphi ye-input micro processing controller PLC.
Ekuqaleni, umusi ufakwa esitsheni esiphindayo ngamapayipi okusabalalisa umusi, nomoya uphume ngamaphayiphu omoya. Lapho zombili izimo zesikhathi nezinga lokushisa ezisungulwe kule nqubo zihlangatshezwa ngasikhathi sinye, inqubo iya phambili ukuze ifike esigabeni.kuwo wonke ama-come-up kanye nokuvala inzalo, umkhumbi we-retort ugcwala umusi ogcwele ngaphandle komoya osalayo uma kukhona ukushisa okungalingani ukusatshalaliswa kanye nenzalo enganele. Ama-bleed kufanele avulekele wonke umoya, aqhamuke, apheke ukuze isitimu sikwazi ukwakha ukuhlangana ukuze kuqinisekiswe ukufana kwamazinga okushisa.
Iziphuzo (amaprotheni yemifino, itiye, ikhofi): ithini
Imifino nezithelo (amakhowe, imifino, ubhontshisi): ithini
Inyama, izinkukhu: i-tin can
Inhlanzi, ukudla kwasolwandle: i-tin can
Ukudla kwezingane: i-tin can
Ukulungele ukudla, iphalishi: ikani likathayela
Ukudla kwezilwane ezifuywayo: ithini
Langaphambilini Ukucwiliswa Kwamanzi
Olandelayo: I-Steam ne-Air Retort
Okuzenzakalelayo Steam Batch Horizontal Retort
Umshini Wokubuyisa Umusi
I-Steam Rotary Retort